Indawo enemozulu entle kunye nembonakalo entle - I-Airbnb
Indawo enemozulu entle kunye nembonakalo entle
Tocash, Áncash, Peru
Ifama sinombuki zindwendwe onguRossana
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uRossana iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Umbono onomtsalane we-panoramic we-Huandoy kunye ne-Huascaran peaks, phakathi kwe-Cordillera Blanca kunye ne-Negra, iindawo eziluhlaza, ukuzola apho emaphandleni akunika khona, indawo yokupaka, indawo ye-barbecue, amagumbi athuthuzelayo kunye athokomeleyo, kwisitayile sakudala kunye noyilo. Uya kuba ne-400m2 onayo, ayabelwa nabani na ongaphandle kweqela lakho. Ifakwe kwimizuzu eli-10 ngokuhamba ukusuka kwisixeko saseCaraz. kwidolophu entle yaseGUADALUPE DE TOCASH
Umbono obonelelwa yiVilla Buenaventura uya kukutsala ukusuka ekuphumeni kwelanga ukuya ekutshoneni kwelanga ekukhanyeni kwenyanga. Ukuzola kunye noxolo lwamaphandle kuya kwenza ukuhlala kwakho kube ngamava omlingo kwaye ongalibalekiyo. Iindawo zethu eziphangaleleyo kunye nezamkelekileyo ziya kukuvumela ukuba wonwabe ngokukhululeka okwaneleyo.
Ifakwe kwimizuzu eli-10 ukusuka kwisixeko saseCaraz, idolophu yaseGuadalupe de Tocash ipholile kwaye izolile, ineendawo zokugcina iimpahla ezisisiseko zokuthengwa kokutya, utywala kunye neemveliso ezisisiseko zococeko. Unokwenza izinto ezinkulu ezithengiweyo kwisixeko saseCaraz, okanye unxibelelwano lwangaphambili kunye nam ndingenza uhambiso olusuka esixekweni.
Gracias a uds, son excelentes huéspedes, cuiden mucho del hermoso Rocky
Ndifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku kwimeko kaxakeka okanye nawuphi na umbuzo.